सरकारको नालायकीपनको पराकाष्टः मोटरसाईकल देखि मोबाइल फोन आयतमा प्रतिबन्ध, जनतालाई मंहगीको उपहार ! - Aathikbazarnews.com सरकारको नालायकीपनको पराकाष्टः मोटरसाईकल देखि मोबाइल फोन आयतमा प्रतिबन्ध, जनतालाई मंहगीको उपहार ! -
मुलुकमा अहिले आर्थिक संकट छ भन्दा फरक पर्दैन । यही आर्थिक संकट देखाउदै सरकारले एक पछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय निर्णय गर्दै आएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । सरकारले हालै एक दर्जन बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । गाडी देखि मोबाइल सम्म आयातमा सरकारले रोक लगाएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशनमार्फत रोक लगाइएको केही वस्तुको आयातलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बन्देज लगाएको छ । सरकारले राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै २०७९ असार मसान्तसम्मलाई आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । कुनै पनि प्रकारका निजी सवारी साधनदेखि मोटरसाइकल, मोबाइल फोन, टेलिभिजन आयातमा सरकारले पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो सरकारको नालायकीपनको पराकाष्ट हो भन्दा अब फरक पर्दैन । यसले जनतालाई मंहगीको थप मारमा पर्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
सरकारका अनुसार, अब कुरकुरे, लेज र यस्तै उत्पादन आयात गर्न पाइने छैन । सबै प्रकारका तयारी मदिराको आयात पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्च पदार्थ बाहेक) को आयात पनि बन्द गराइएको छ । हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक) आयातलाई पनि सरकारले बन्देज लगाएको देखिन्छ । व्यापार घाटा उच्च दरले बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेपछि राष्ट्र बैंकले मौखिक आदेशमा ४७ वटा समूहभित्रका ३०० वस्तुको आयात बैंकमार्फत बन्द गराएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको मौखिक आदेशमा बन्द गरिएपछि यो कहिलेसम्म जाने हो भनेर गाडी बिक्रेताहरुको संगठनले मिति तय गर्न माग गरिरहेका थिए । बैंकहरुले पनि लिखितरूपमा वस्तुको सूची उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । यहि बीचमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नबिल बैंक लिमिटेड र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड लगायत बैंकले गाडीलगायत विलासिताका वस्तु आयात रोके पनि अन्यको प्रतितपत्र खोलिरहेका र केहीले भने पूर्ण रुपमा बन्देज नै लगाएको समाचार हामीले दिएका थियौं । राष्ट्र बैंकको मौखिक आदेशमा बन्द गरिएपछि यो कहिलेसम्म जाने हो भनेर गाडी बिक्रेताहरुको संगठनले मिति तय गर्न माग गरिरहेका थिए । बैंकहरुले पनि लिखितरूपमा वस्तुको सूची उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । यहि बीचमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
२५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर सुनचाँदी जस्ता वस्तुको आयातलाई भने रोकिएको देखिदैन। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सुनचाँदी आयातका लागि प्रतितपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । अब भने बैंकहरुले यी वस्तु आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्न पाउने देखिन्छ ।
सरकारले ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका कलर टेलिभिजनको आयातमा बन्देज लगाएको छ । साथै जीप, कार र भ्यानहरु (एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक) आयात पनि रोकेको देखिन्छ । २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर सुनचाँदी जस्ता वस्तुको आयातलाई भने रोकिएको देखिदैन। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सुनचाँदी आयातका लागि प्रतितपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । अब भने बैंकहरुले यी वस्तु आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्न पाउने देखिन्छ । हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकले मौखिक रूपमा ड्राइफुट्सदेखि सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्रीसम्मको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । घरमा प्रयोग हुने मार्बल, टायल आयात पनि रोकिएको थियो । अब भने यी वस्तु आयात गर्न बाधा पुग्ने छैन । भन्दा फरक पर्दैन ।